HeartBeat Nepal स्वास्थ्य Archives - HeartBeatNepal
हेटौँडा – दुई साताअघि हेटौँडामा हजारौँ कुखुरा मर्नुका कारण बर्डफ्लु नै भएको पुष्टि भएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार परीक्षणबाट बर्डफ्लु प्रमाणित भएकाले चारकिल्ला तोकी नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन गरी सकिएको छ । हेटौँडाका किसान कुलप्रसाद चौलागाईंले पाल्नुभएको कुखुराको नमूना परीक्षणमा बर्डफ्लुको जिवाणु रहेको पुष्टि भएको हो । दुई साताअघि करौडौँको क्षति हुने गरी दुई दिनको अन्तरालमा हेटौँडाका केही कुखुरा व्यवसायीको हजारौँ कुखुरा मरेका थिए । किसानले दिएको जानकारीअनुसार हेटौँडा–७ मा १० हजारभन्दा बढी कुखुरा मरेका थिए । भेटेनरी अस्पतालले एच नाइन भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि…
July 22, 2018 Madan Oli
संसारमा साहाकारी भन्दा मांसाहारी धेरै छन् । मासुका परिकार पारखीहरुका लागि यो समाचार प्रभावकारी हुन सक्छ । मासुका परिकार कसरी स्वादिष्ट बनाउने भन्ने बारेमा हामी अधिक मात्रमा यहाँहरुलाई जानकरी दिंदैछौ । मासुका परिकारमध्ये हामी आज खसीको मासु पकाउने तरिका जानकारी दिनेछै । ‘मटन बिर्यानी’ कसरी बनाउने ? घरमा मासु ल्याएपनि विभिन्न परिकार बनाउनको लागि सिपको जरुरत पर्छ । तर सिपको अभावमा धेरै परिकारहरु भने बनाएर खाने गरिएको हुँदैन । खसीको मासुको बिर्यानी बनाउनको लागि हामीले एक किलो खसीको मासुरको आधारमा महत्पुर्ण जानकारी दिने तयारी गरेका छौ । मटन बिरीयानीको लागि…
ब्यानर न्युज, स्वास्थ्यLeaveacomment
July 21, 2018 Madan Oli
५ साउन, विराटनगर । साउन महिनामा पर्याप्त पानी नपरेका कारण पूर्वी तराईमा ४० डिग्री आसपास गर्मी बढेको छ । अधिक गर्मी बढेका कारण पूर्वीशहरका स्विमिङ पुलमा मानिसहरुको भीड लाग्न थालेको छ । गर्मीमा मोरङ र सुनसरीका केही सीमित स्विमिङ पुलहरुले राम्रो आय आर्जन गरिरहेको भएता पनि पर्याप्त पौडी पोखरीहरुको अभाव छ । भएका कतिपय पौडीस्थलहरु पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विश्वस्त हुने खालका छैनन् । गर्मीमा पौडीको वयानै गर्न नसकिने मज्जा हुने भएकाले धेरै मानिसहरुको दिन कटाउने थलो स्विमिङ्ग पुललाई बनाउन थालेका छन् । कतिपय युवा साँझ परेपछि दुई घण्टासम्म स्विमिङ खेल्ने…
ब्यानर न्युज, समसामयिक, स्वास्थ्यLeaveacomment
जुम्लामा गोलि चल्यो प्रहरीको गोली लागेर प्रहरीकै मृत्यु
July 19, 2018 July 19, 2018 Madan Oli
जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने क्रममा भएको झडपका क्रममा गोली लागेका प्रहरीको मृत्यु भएको छ । डा केसीको समर्थनमा अस्पताल वरिपरी जम्मा भएका समर्थकहरुलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले गोली चलाएका थिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कयौँ प्रहरी र केसी समर्थक घाइते बनेका थिए । गोली लागेका घाइते प्रहरीको केही समयअघि मात्रै मृत्यु भएको जनएको छ । बिहीबार बिहान डा केसीलाई लिन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर गएपछि अस्पतालमा स्थानीय र विद्यार्थीले अवरोध गरेका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज, अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै गोली समेत चलाएको थियो।…
ब्यानर न्युज, समाचार, स्वास्थ्यLeaveacomment
June 6, 2018 Madan Oli
– डा.बालकृष्ण शाह म २५ वर्षीया गृहिणी हुँ । हाम्रो चार महिनाको छोरा छ । मेरो महिनावारी सुरु भएको छैन । मेरो बाबुले दूध खाँदैछ । यो अवस्थामा मैले परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? परिवार नियोजनको साधनले स्तनपान गरिरहेको शिशुको स्वास्थ्यलाई असर त गर्दैन ? एन. शिशुले स्तनपान गरिरहेको अवस्थामा पनि महिनावारी सुरु नभएसम्म गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा भर पर्न सकिँदैन । शिशु राम्रोसँग नहुर्किएसम्म र आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो नभएसम्म अर्को सन्तान जन्माउनु हुँदैन । तपाईंको उमेर २५ वर्ष मात्र भएको र एउटा…
विचार, समसामयिक, स्वास्थ्यLeaveacomment